OneUI 3.0 na gam akporo 11 na-abịa Samsung Galaxy Z Flip | Gam akporosis
OneUI 3.0 na gam akporo 11 bịarutere na Samsung Galaxy Z Flip
Ọ bụ afọ ọhụrụ, na mmelite ngwanrọ ọhụrụ na-abịa Samsung Galaxy Z tụgharịa, onye nke South Korea si mpịachi smartphones na oru na February 2020.
Ngwaọrụ a na-anabata gị ugbu a ihe ngwanrọ ohuru nke na-abia na nhazi nhazi nke OneUI 3.0 na sistemụ arụmọrụ nke Android 11 n'ebube ya niile.
Samsung Galaxy Z Flip na-enweta ngwugwu ngwa ngwa na nọmba ụlọ F700FxXx3CTLx, nke, dị ka anyị kwurula, na-agbakwunye OneUI 3.0 na gam akporo 11. Mmelite, nke a na-enye site na OTA, Ọ karịrị 2GB buru ibu ma gụnye December patch nche 2020.
Na ya, ndị ọrụ na-enweta otu ọrụ na atụmatụ dị ka egosipụta nkata, ikike pụrụ iche na ntọala ihuenyo mkpọchi, yana nyocha ọrụ onye arụzigharị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Dabere na akụkọ kachasị ọhụrụ, OneUI 3.0 na gam akporo 11 maka Samsung Galaxy Z Flip na-enye nwayọ nwayọ na Europe na Nigeria. Nke a pụtara na o yikarịrị ka ọ bụghị mpaghara niile natara mmelite a n'oge a, mana ọ doro anya na n'ihe gbasara ụbọchị ma ọ bụ izu ole na ole, ha ga-enweta ya. Mgbe nke a gasị, ọ ga-ekesa ụwa niile na ndị ọrụ niile.
Cheta na ekwentị mpịachi nwere ihuenyo 6.7-inch na teknụzụ AMOLED. Chipsetị processor nke edobere n’okpuru mkpuchi ya bụ Snapdragon 855 Plus, ebe 8 GB RAM na 3.0 GB UFS 256 dị n’ime ya bụ ihe etinyeziri n’usoro.
Igwefoto igwefoto nke arụmọrụ a dị elu bụ nke nwere oghere abụọ nke 12 MP na oghere f / 1.8 na oghere 12 MP sara mbara-elu na oghere f / 2.2 maka foto sara mbara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OneUI 3.0 na gam akporo 11 bịarutere na Samsung Galaxy Z Flip
Otu esi edekọ ihe ederede na-enweghị ịpị bọtịnụ na WhatsApp